4 Qaabood Oo Looga Hortago Furriinka & Isku Dhaca Lamaanaha - Aayaha
Waxaan idiin soo gudbineynaa 4 qaabood oo looga hortago burburka xiriirka lamaanaha oo aad kuu anfacaya.
Mid kamid ah sababaha ay u burburaan guurka lamaanaha ayaa ah Samir la’aan. Way fududahay in dad badan oo muddo isqabay uu samirka ka tago, marka si aad uga hortagto in dulqaadka uu Meesha ka baxo waxaa muhiim ah in adiga iyo lamaanahaaga aad isku dulqaadataan isla markaana jacaylkiina aad ku raaxeysataan.
Waqti isla wada qaata oo jadwal aad waqti kuwada qaadataan sameysta.
Mudnaan sii lamaanahaaga
Isku xirnaan la’aanta ka dhaxaysa lamaanayaasha ayaa ah sabab kale oo guurku u burburo. Marka aad muhiimad siisid waxyaabaha kale intii aad lamaanahaaga siin lahayd waxaad jartay dareenka guurka waxayna keeneysaa burbur.
Mudnaanta koowaad sii Ninkaaga/xaaskaaga sidoo kalena isku day inaad si joogto ah u sheekeysataan adiga iyo lamaaanahaaga sabatoo ah waxay kaa caawinaysaa inaad isku soo dhawaatiin adiga iyo lamaanahaaga.
Iska ilaali muranka micno la’aanta ah
Qaar kamid ah muranada dhexmara lamaanaha waa kuwo aanan wax micno ah lahayn isla markaana la iska ilaalin karo.
Haddii ay jirto qalad aad u heysid lamaanahaaga isku day inaad si tartiib ah uga wada hadashaan intii ay xaaladda faraha ka bixi lahayd.
Markaad ka carotid wax ay sameysay xaaskaaga waa inaad kala hadashaa adigoo degan.
Diiradda ha saarin canugaaga oo ha iska indha tirin seygaaga
Tani waa wax ay haweenka badankood ka simanyihiin, marka uu canug dhasho way dayacdaa seygeeda iyadoo diiradda saarta canugeeda. Taasi waxay dhibaato ku keeneysaa guurkaaga oo ugu dambeyn sababi karta furriin. Caruurtaada waa inaysan kahor marin seygaaga, waana inaad fahamtaa in haddii guur wanaagsan uu kaala dhexeeyo seygaaga in sidoo kale uu ugudbayo caruurtaada.
Talooyinkaan waxay kaa caawinayaan inaad kahor tagtid burbur ku yimaada guurka lamaanaha.
UGAAR AH DUMARKA: Gabaryahay Ilaali Sharciyadaan Si Guurkaaga Aad Ugu Raaxeysatid